Akụkọ - Uru nke mkpuchi ultrasonic
Uru nke ultrasonic akara
Ultrasonic bụ otu ụdị igwe na-efegharị efegharị, nke a na-agụnye usoro ntanetị na usoro vibration ultrasonic. Ọ bụ ike na-agbanwe agbanwe nke ike dị elu, ike dị elu, nke ikike ịnya ụgbọ na-apụ apụ. Na usoro kwekọrọ ekwekọ yana isi ihe bụ isi ihe dị na teknụzụ ultrasonic.
Digital akpaka ugboro mgbake ultrasonic generator → Transducer (Mepụta ultrasound-efegharị efegharị) rasonic Ultrasonic Horn (Enlarge ultrasonic) → akpụzi Head (Ebunye ultrasound)
Na uru na ọghọm nke ịkpụzi akpụzi bụ akụkụ dị mkpa nke ultrasonic, anyị na-ewebata onye nyocha nyocha ọfụma, onye na-enyocha ihe nyocha dị iche iche, site na nyocha zuru oke maka usoro ebu na nyocha nke ebili mmiri site na ngwa ndị a. ike nke ultrasonic.ma belata mmebi na-adịghị ala ala n'ihi ugboro ugboro ekwekọ na igwe, kedu ihe ọzọ, gbatịkwuo ndụ igwe na ebu.
N'ihi na Plastic tube akara ụkpụrụ, nwere dị iche iche akara ụdị, ọ na-atụ aro dabere na dị iche iche ndị ahịa chọrọ.
Na Ultrasonic akara n'ime akara ebe nke tube na-ewe iwe dị ọkụ ugboro ugboro esemokwu mepụtara site na mpi ultrasonic. Mgbe ahụ, a na-ejikọ ọkpọkọ ahụ na anvil ma mee ka ọ dị mma ka ọ bụrụ akara ọkpọkọ ahụ.
Ultrasonic akara agaghị emerụ ihe onwunwe n'ime na akara ọzọ bụ idiocha na mụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ogo dị elu na nkwụsi ike siri ike, a ga-atụ aro ụdị akara nke ultrasonic.
Ọ bụrụ na ị nwere dayameta ọkpọkọ dị iche iche, igwe mkpuchi ultrasonic naanị mkpa ịgbanwe ndị na-ebu ọkpọkọ na ọ dịghị mkpa ịgbanwe akụkụ preheating, ụgwọ na oge achọrọ dị obere.
Ka ọ dị ugbu a, ebe ọ bụ na akara nke ultrasonic bụ akara oyi, ị chọghị ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji rụọ ọrụ. Chekwa ma ohere ala ma ụgwọ ọkụ eletrik.
Ya mere, kpọtụrụ kpọtụrụ HX Machine ugbu a, gị onye-nkwụsị nkwakọ igwe soplaya na ka anyị nyere gị aka!